Iwe kana mudiwa wako ane kodzero yekumamony? Law & More inokubatsira
Dhivhosi Mutemo » Partner Alimony
Iwe kana wawakarambana naye hauna mari yakakwana yekurarama mushure mekurambana? Ipapo mumwe wacho anenge aine chisungo chekubhadhara alimony kune iye wawakamboroora naye.
Ndirini paunofanirwa kugashira alimony kubva kune wawakamboroora naye? Muchokwadi, iwe une kodzero yekudyidzana neamony kana, mushure mekurambana, hauna mari yakakwana yekuzviriritira.
UNODA BATSIRO KUTI Uite KUNYANYA PartenER ALIMONY?
> Chikamu chemudiwa akamony
> Kuverenga kuchengetedza
> Kuchinja alimony
Ndirini paunofanirwa kugashira alimony kubva kune wawakamboroora naye?
Muchokwadi, iwe une kodzero yekudyidzana neamony kana, mushure mekurambana, hauna mari yakakwana yekuzviriritira. Chiyero chako chekurarama panguva yemuchato chinozoiswa mukati kuitira kuti uone kana iwe uine kodzero yekufambidzana naye womony. Mukuita, mumwe wevaviri vaviri varozo anogashira kodzero yekumamony. Muzviitiko zvakawanda uyu ndiye mukadzi, kunyanya kana anga achitarisira pakuriritira mhuri nevana. Pakadaro, mukadzi anowanzo asina mari kana mari shoma kubva kubasa rechinguvana. Mune mamiriro ezvinhu ekuti murume akazadzisa basa rekuti 'murume wemumba' uye mukadzi ave kuita basa, murume anogona kuzotora mukwati wemurume wake.
Chikamu chemudiwa akamony
Mukubvunzana, iwe nemumwe wako wawakambobatsirana naye munogona kubvumirana pahuwandu hwomumwe mukadzi mukwanyina. Kana iwe usingakwanise kusvika pachibvumirano pamwe, mumwe we magweta edu achafara kukubatsira. Kwete chete isu tinokwanisa kukubatsira iwe nenhaurirano yekuita, asi isu tinogonesawo kuona huwandu hwomumwe wakabatanidzwa akamony iwe. Isu tinoita izvi nekugadzira kuverenga kwekugadzirisa.
Mutongi haangotarisa chete mamiriro emari yemugadziri wekugadzirisa, asiwo pamamiriro emari emubhadhara. Nehwaro hwemamiriro ezvinhu ese, dare rinoda kuona kana mumwe wenyu akafanira kugamuchira alimony uye, kana zvakadaro, huwandu hweakamony. Mune zvimwe zviitiko, zvinokwanisika kuti iwe une kodzero yekuchengeta mumwe wako, asi kuti zvemari zvewawakaroora mumwe wako zvinoratidza kuti iye haakwanisi kubhadhara mukwanyina wemony.
Kuverengerwa kwekuchengetedza iko kuverenga kwakaoma kunzwisisa sezvo zvinhu zvakawanda zvichitarisirwa kuti zvijikanwe. Law & More ichafara kuitisa iyo molekaneonyony kuverenga iwe. .
Kuwanda kwemumwe wemurume kunoenderana nekudiwa kwemunhu iye anogamuchira alimony uye pane iyo nzvimbo yemunhu anofanira kubhadhara alimony. Kuti uone izvo zvinodiwa zveanogamuchira anogamuchira, chiyero chengangoita makumi matanhatu muzana yemari yemhuri inobvisa mari inobhadharwa chero vana vanofungidzirwa.
Iko kurema-inotakura huwandu hwekuverenga inogadzirwa kune ese mapato. Kuverenga uku kunoona kana munhu ane mhosva yekuchengeta aine zvakakwana mari mari kuti akwanise kubhadhara alimony. Kuti uzive huwandu hwemari hwemunhu anofanira kubhadhara alimony, mari yaanotambira inofanira kutanga yatemerwa. Iye alimony anibhadhara anogona kutanga abvisa mari yakati wandei kubva pamari iyi. Idzi ndidzo mari dzinofanira kubhadharwa naAmonony kuti abhadhare (mitengo).
Pakupedzisira, fananidzo inotakura mutoro inofanirwa kuve yakagadzirwa. Iyi fananidzo inoshandiswa kuverengera huwandu hwekugadziriswa iyo mapato ane rusununguko rwemari yakaenzana. Iyo chiyero chemukweretesi wekugadzirisa inoenzaniswa nekuyera kune uyo ane chikwereti chekugadzirisa. Pfungwa iri shure kweiyi ndeyekuti wega wekugadzirisa anenge achifanirwa kunge ari munzvimbo iri nani yemari pane iye anokweretesa mari yekuchengeta semugadziro wekubhadhara mari.
Unoda kuziva kuti mamiriro ako emari achazovei mushure mekurambana kwako? Kubata Law & More uye isu tinogona kushanda newe kuti tizive kuti mangony yakadii yauchabhadhara kana kugamuchira.
Kana iwe uchida unilaterally kudzima kana kuchinjisa mukwanyina alimony, izvi zvinofanirwa kuitwa kuburikidza nedare. Tinogona kuendesa chikumbiro chekuchinja kudare pachinzvimbo chako. Dare rinogona kushandura mukwanyina alimony, kureva kuwedzera, kuderera kana kuiswa kune zero. Zvinoenderana nemutemo, panofanirwa kuve nekushandurwa kwemamiriro ezvinhu. Kana dare rikaona kuti hapana shanduko yemamiriro ezvinhu, chikumbiro chako hachizopihwa. Pfungwa iyi haina kuzotsanangurwa zvakare mumutemo uye nokudaro inogona kubata nemamiriro akasiyana siyana. Mukuita, izvi zvinowanzosanganisira shanduko mumamiriro emari yemumwe wevaimbobatana navo.
Iko kusungirwa kwekubhadhara mweni alimony kunogona kupera mune zvinotevera mamiriro:
• muchiitiko chekufa kwemuwawakaroorana naye;
• kana nguva yakakwana yekugadzirisa yakatarwa nedare yapera;
• kana munhu anogashira akachengeta akaroora zvakare, apinda mumubatanidzwa wakanyoreswa kana kutanga kugara pamwechete;
• kana mamiriro emari achinja uye munhu anogashirwa kuchengetedza anogona kuzviraramisa
Magweta edu okusarudzika ane ruzivo rwemutemo wemhuri uye webhizimusi kuziva-maitiro uye saka zvakaiswa zvakajeka kuti zvipe rubatsiro rwepamutemo neremitero mune idzi kesi. Iwe unoda here gweta rekurambana? Kubata Law & More.